Feature image for Lacagtaada
Iimaylka: unclaimed.property@state.mn.us Telefoonka: 651-539-1545 Greater MN keliya: 1-800-925-5668 Dhowrista iyo wargelinta macaamiishu waa qayb muhiim ah o shaqada aanu qabano ah maalin kasta xaga Waaxda ganacsiga ee Minnesota. Macluumaadka qaybta waxay kaa caawin doonaa inaad samayso go’aano dhaqaale oo laga warqabo, laysaga ilaaliyo gol daloolooyinka iyo khiyaamada, iyo lagu ilaaliyo macluumaadkaaga dhaqaalaha gaarka ah. Hantida aan la sheegan
Qaybta Hantida aan la sheegan waxay ka msauul yihiin haynta maaliyada laga guuray ama aan la sheegan ama hantida ilaa mulkiilaha xaqa u leh ama dhaxlihiisa la helo. Qaybtan waxay celisay 31 boqolkiiba hantida aan la sheegan ee looga warbixiyay gobolka ee mulkiilaha xaqa u leh iyaddoo la maray barnaamijka hantida aan la sheegan. Mid ka mid 20 dadka degen Minnesota waxa uu haystaa $100 ama ka badan Maaliyada Hantida aan la Sheegan ee Gobolka Soo he haddii aad hayso hanti aan la sheegan!
Waxaanu doonaynaa inaanu kula xidhiidhno!
Wararka Cusub ee Iimaylka Hantida aan la Sheegan
Si aad ugu biirto wararka cusub ama u hesho dookhyadaada ka qayb noqoshada, fadlan geli macluumaadkaaga xidhiidhka xaga hoose.
Cinwaanka Iimaylka Footer contents